March 14, 2021 344
बलिउडका महा:नायक भनिने अमिताभ बच्चनले प:र्दामा एकसे एक दमदार भूमिका निभाए’का छन् । ‘एंग्री योंग म्यान’ देखि कमेडीसम्म हरेक भूमिकामा अमिताभ बच्चनले आफ्नो अभिनयमार्फत् दर्शक:लाई मनोरञ्जन प्रदान गरे:का छन् ।
यद्यपि, आफ्नो फिल्मी करिय’रमा बिग बीले यस्ता केही फिल्म पनि गरेका छन् जुन उनको करियरको सबैभन्दा विवा’दित फिल्म मानियो । यसमा स:मावेश छ राम:गोपाल वर्माको फिल्म ‘निःशब्द’ । यसमा अमिताभ बच्चन अभिनेत्री जिया खानसँग देखिएका थिए । यो फिल्ममा उनीहरुको इन्टिमेट सीनले निकै हंगामा म’च्चाएको थियो ।
२ मार्च सन् २००७ मा रिलि’ज भएको यो फिल्म’को कहानी विवादा’स्पद उपन्यास लोलिता र सन् १९९९ मा रिलिज भएको हलिउड फिल्म अमेरिकन ब्यूटीबाट प्रेरित भएको बताइ:नछ । यो फिल्ममा अमिताभ बच्चनले आफूभन्दा ४४ वर्ष कान्छी अभिनेत्री जिया खानसँग बोल्ड सिन दिएका थिए जसका का’रण उनले आलोच:नाको शिकार हुनु:परेको थियो । भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचारलाई विश्वास गर्ने हो भने जया बच्चन पनि अमिता’भसँग निकै रिसाएकी थिइन् ।
फिल्ममा अमिताभ बच्चन:लाई एक विवाहित व्यक्तिको रुपमा देखाइएको छ जस:का एक छोरी पनि हुन्छिन् । उनकी छोरी:की साथी:को भूमिका जिया खानले नि:भाएकी थिइन् । उनीतर्फ अमिताभ आकर्षित हुन्छन् । यस्तोमा जिया खान र अमिता’भबीच थुप्रै लभ मेकिङ सीन सुट भएका थिए । यो फिल्म २० दिनभित्र सुट गरिएको थियो ।
फिल्ममा जिया र अमिताभ बच्चनको लिपलक सीन पनि थियो, यो सबैभन्दा बढी विवा’दमा आए:को थियो । यो सीन:का कारण जया असाध्यै रिसाएका भएर उनले त्यस उप्रान्त कुनै पनि फिल्ममा यस्ता दृश्य नगरेको बताइन्छ । अमिताभ बच्चन:लाइए पनि यो फिल्म:को विवादबाट बाहिर निस्कन धेरै स:मय लागेको थियो ।
यो फिल्म जिया खान र अमि’ताभ बच्चनको उमेर’को भिन्नता र इन्टिमेट सी:नका कारण चर्चामा आएको थियो । बक्स अफिसमा यो फिल्मले केही विशेष प्रति’क्रिया पाएको थिएन । यहाँसम्म कि रामगोपाल वर्माले पनि उनले निशब्द र आगजस्ता फिल्ममा अमिताभ बच्चन’लाई लिएर गल्ती गरेको बताउने गरेका छन् । – रातोपाटी
Posted in बलिवूड
Prevके कारणले प’ड्किन्छ मोबाइल फोन ? मोबाइल चलाउने सबैले थाहा पाउनैपर्ने
Nextकिन एकसाथ काम गर्दैनन् शाहरुख र अक्षय ? यस्तो रहेछ कारण
भारतले भन्यो : लिपुलेकको सडक भारतीय भूमिमै बनाइएको हो..
नायिका श्रद्धा कपूर र नेपाली युवा रोहनको बिहेको हल्ला सुने पछि बाबु शक्तिले यस्तो भने…
मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक पत्रकार सिवाकोटीलाई सु’रक्षा चुनौती, शंकास्पद व्यक्तिले पछ्याउदै (हेर्नुहोस् भिडियो)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (51184)